Otu nchịkọta akụkọ recetin | Ntụziaka
Recetin bu a weebụsaịtị maka isi nri esi nri emere maka ụmụaka. Nsogbu dịkarịara ọtụtụ ndị nne bụ mgbe ha na-akwadebe menu maka ụbọchị nke ọ bụla. Gịnị ka m ji esi nri taa? Kedu ka m ga-esi mee ya umu m na-eri akwukwo nri? Olee otú m nwere ike ịkwadebe a nri zuru oke maka ụmụ m? Iji zaa ajụjụ a na ọtụtụ ndị ọzọ, a mụrụ Recetín.
Edeberela nri niile dị na weebụsaịtị anyị site na ndị siri nri bụ ndị ọkacha mara na nri ụmụaka, yabụ ndị nne na nna nwere nkwa niile iji na-akwadebe kichin mara mma ma dị mma. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ akụkụ nke weebụsaịtị a ma soro anyị bipụta usoro ị na-esi nri, ị ga-abanyerịrị mezue ụdị ndị a anyị ga-akpọtụrụkwa gị ozugbo o kwere omume.
Want chọrọ ịchọpụta anyị otu osi ite? Ọfọn, lee, anyị na-ewetara ma ndị so n'òtù a n'oge a na ndị rụkọrọ ọrụ anyị n'oge gara aga.
Enwere m ogo na Mgbasa Ozi na Mmekọrịta Ọha. Ọ na-amasị m esi nri, ịse foto na ịnụ ụtọ ụmụntakịrị m ise. Na December 2011 mụ na ezinụlọ m kwagara Parma (Italytali). N'ebe a, m ka na-eri nri Spanish mana m na-esikwa nri mba a. Echere m na ị masịrị efere ndị m na-akwadebe n'ụlọ, nke a haziri maka ọ theụ nke ụmụntakịrị.
Abụ m onye a na-apụghị ịgbagha agbagha kwesịrị ntụkwasị obi nke kichin na karịsịa nke ihe ịchọ mma. M ji ọtụtụ afọ arara akụkụ nke oge m na-akwadebe, na-amụ na-enwe ọtụtụ Ezi ntụziaka. Abụ m nne nke ụmụ abụọ, onye nkụzi na-esi nri maka ụmụaka na m hụrụ foto n'anya, yabụ na-eme ezigbo nchikota iji kwadebe nri kacha mma maka Ntụziaka.
Enwere m mmasị na isi nri, ọpụrụiche m bụ desserts. M na-akwadebe ihe ndị na-atọ ụtọ, nke ụmụntakịrị agaghị enwe ike iguzogide. You chọrọ ịma ka esi esi nri? Mgbe ahụ nweere onwe gị iso m.
Amuru m na Asturias na 1976. Abu m nwa amaala nke uwa ma ana m ebu foto, ihe ncheta na nri si ebe a na akpa m. A bụm n’ezinụlọ nke oge dị ukwuu, nke ọma na nke ọjọọ, n’agagharị na tebụl, yabụ kemgbe m dị obere kichin adịla na ndụ m. N'ihi nke a, m na-akwadebe Ezi ntụziaka nke mere na ụmụ ntakịrị tolitere na ahụ ike.
Aha m bụ Irene, amụrụ m na Madrid ma enwere m nnukwu ọchichị nke ịbụ nne nke nwatakịrị onye m na-asọpụrụ maka ara na onye hụrụ n'anya na-eri nri, gbalịa nri ọhụrụ na ụtọ. Kemgbe ihe karịrị afọ 10, anọwo m na-arụsi ọrụ ike na-ede ihe na blọọgụ gastronomic dị iche iche, n'etiti nke, doro anya, Thermorecetas.com pụtara. N'ime ụwa ịde blọgụ a achọpụtala m ebe magburu onwe ya nke mere ka m zute ndị mmadụ ma mụta ọtụtụ usoro na usoro iji mee ka nri nwa m kachasị mma na anyị abụọ nwere ọ preparingụ ịkwadebe na iri nri dị ụtọ.